Ukusindisa izimpilo kwaba ukuphela kwenhloso yeChina ngemuva kosizo lomhlaba wonke, kusho uWang
I-China ibilokhu ihlinzeka ngosizo kwamanye amazwe ukulwa ne-COVID-19 ngenhloso eyodwa yokuzama ukusindisa izimpilo zabantu abaningi ngangokunokwenzeka, kusho iKhansela Lombuso kanye noNgqongqoshe Wezangaphandle uWang Yi ngeSonto.
Engqungqutheleni yezindaba ebibanjelwe eceleni kweseshini yesithathu yengqungquthela ye-13th National People's Congress, uWang uthe iChina ayilokothi ifune izithakazelo zezomnotho zezwe ngosizo olunjalo, futhi ayifaki noma yiziphi izintambo zezepolitiki osizweni.
I-China yenze ezinyangeni ezimbalwa ezedlule usizo oluphuthumayo olukhulu kunawo wonke emhlabeni kusukela kwasungulwa iChina entsha.
Ihlinzeke ngosizo emazweni angaba ngu-150 kanye nezinhlangano ezine zamazwe ngamazwe, yabamba izingqungquthela zevidiyo ukuze yabelane ngolwazi lokwelashwa nokulawula izifo emazweni angaphezu kuka-170, futhi yathumela amathimba ochwepheshe bezokwelapha emazweni angu-24, ngokusho kukaWang.
Iphinde yathumela imaski eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-56.8 kanye nezingubo zokuzivikela eziyizigidi ezingama-250 ukusiza umphakathi wamazwe omhlaba ukulwa nalolu bhubhane, kusho uWang, wengeza iChina imi ngomumo ukuqhubeka nokunikeza usizo.
Isikhathi sokuthumela: May-21-2020